Daawo Sawirada”Jeneraal Xasuuqay Muslimiin badan oo ku dhintay gudaha Xabsi kuyaala Dalka Holland - iftineducation.com
iftineducation.com – Generaal sare oo katirsanaa Ciidamada Dowlada Serbia kuna eedeesnaa in uu gacan weyn ku lahaa dagaalkii ka dhacay Bosnia ee lagu xasuuqay kumanaan Muslimiin ah ayaa lagu soo waramayaa in habeen kahor uu kudhintay gudaha xabsi kuyaala dalka Holland.
Sargaalkan oo lagu magacaabo Gen.Zdravko Tolimir, ayaa ku jiray xabsi kuyaala daka Holland, waxaana horey Maxkamada Caalamiga ah ee Danbiyada Dagaalka ku xukuntay xabsi daa’in kadib markii la ogaaday in uu ku lug lahaa xasuuqii Bosnia ka dhacay sanadkii 1995-tii.
Gen.Zdravko Tolimir, oo 67 sano jir ah ayaa sanadkii 2012-kii waxaa lagu helay dambiyo dagaal gaar ahaan in uu ku lug lahaa xasuuqii loo geestay muslimiinta Boosnia, waxaana ninkan lagu riday xukun xabsi daa’in ah.
Geerida Dambiilahan Muslimiinta badan ku laayay dalka Bosnia ayaa la xaqiijin waxa sababay, hasa ahaatee waxaa soo baxaya in uu horey u qabay cuduro dhanka wadnaha ah sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay.
Ninkan ku dhax geeriyooday xabsi kuyaala magaalada Hague ee dalka Holland, ayaa la sheegay in uu bixiyay amar lagu xasuuqay dad gaaraya 8,000 qof oo u badna dhalinyaro isugu jiray rag iyo dumar kasoo jeeday Musimiinta Bosnia
Maxkamada Caalamiga ee Dambiyada Dagaalka ayaa horey xukuno kala duwan waxa ay ugu riday saraakiil iyo madax ku lug lahaa Xasuuqii ka dhacay Bosnia, waxaa sidoo kale jira saraakiil kale oo wali dacwado ay ku socdaan oo iyana ku lug lahaa xasuuqaasi.